Joalarm ဆိုတဲ့ appလေးကို တောင်ကိုရီးယားမှာ တီထွင်ထားပါတယ်တဲ့…
အဲ့ဒီ joalarm ဆိုတဲ့ app လေးကို ဖုန်းထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို သဘောကျနေတဲ့လူနဲ့ ၁၀ မီတာ အကွာအဝေးလောက်မှာတင် အဲ့ဒီ app လေးဟာ အချက်ပေးပါတယ်တဲ့…
ကိုယ့်ကိုသဘောကျနေတဲ့သူ အရေအတွက်ကိုလည်း app လေးက တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့…
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့ app လေးက မပြနိုင်ပါဘူးတဲ့….
Kim Jo-Jo ဟာ အထက်တန်းကျောင်းသူတယောက်ပါ…
သူမ မိဘတွေကတော့ သူမငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဆုံးသွားကြပါပြီ.. Jo Jo ဟာ မိဘတွေ မရှိတော့ကတည်းက အဒေါ်မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်ပါတယ်… အဲ့ဒီလို နေထိုင်ရတာဟာ သူမအတွက် မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး…
Jo Jo ဟာ သူမရဲ့ဖုန်းထဲမှာ joalarm ဆိုတဲ့ app ကို ထည့်မထားပါဘူးတဲ့…
Hwang Sun-O ကတော့ Kim Jo-Jo နဲ့ အတူတူပဲ အထက်တန်းကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေသူပါ
Sun-O ဟာ ကျောင်းသား/သူ တွေကြား popular ဖြစ်သူပါ..သူက ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုက သားတယောက်ပါ…
ဒါပေမယ့် Hwang Sun-O က မိဘတွေဆီကနေ အချစ်ကိုမရပါဘူးတဲ့
Hwang Sun-O မှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ Lee Hye-Young ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်
Lee Hye-Young ကလည်းပဲ Sun-O, Jo Jo တို့နဲ့အတူ အထက်တန်းကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေသူပါ…ပြီးတော့ Lee Hye-Young က Jo Jo ကို သဘောကျနေပါတယ်…ဒါကို Hwang Sun-O က သတိထားမိပြီး သူ့သူငယ်ချင်း Hye Young ဟာ တကယ်ပဲ Kim Jo-Jo ကို သဘောကျနေတာလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်တဲ့…ဒါကြောင့် Sun O က Jo Jo ကို kiss ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့….
အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူတို့သုံးယောက်ကြား သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ဘယ်လို အဆုံးသတ်မလဲ
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ drama လေးလာမှပဲအတူတူကြည့်ကြမယ်နော်..
Joalarm ဆိုတဲ့ appလေးကို တောငျကိုရီးယားမှာ တီထှငျထားပါတယျတဲ့…
အဲ့ဒီ joalarm ဆိုတဲ့ app လေးကို ဖုနျးထဲ ထညျ့ထားမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကို သဘောကနြတေဲ့လူနဲ့ ၁၀ မီတာ အကှာအဝေးလောကျမှာတငျ အဲ့ဒီ app လေးဟာ အခကျြပေးပါတယျတဲ့…
ကိုယျ့ကိုသဘောကနြတေဲ့သူ အရအေတှကျကိုလညျး app လေးက တှကျခကျြပေးနိုငျပါတယျတဲ့…
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီလူတှရေဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျကိုတော့ app လေးက မပွနိုငျပါဘူးတဲ့….
Kim Jo-Jo ဟာ အထကျတနျးကြောငျးသူတယောကျပါ…
သူမ မိဘတှကေတော့ သူမငယျငယျလေးကတညျးက ဆုံးသှားကွပါပွီ.. Jo Jo ဟာ မိဘတှေ မရှိတော့ကတညျးက အဒျေါမိသားစုနဲ့အတူ နထေိုငျပါတယျ… အဲ့ဒီလို နထေိုငျရတာဟာ သူမအတှကျ မလှယျကူခဲ့ပါဘူး…
Jo Jo ဟာ သူမရဲ့ဖုနျးထဲမှာ joalarm ဆိုတဲ့ app ကို ထညျ့မထားပါဘူးတဲ့…
Hwang Sun-O ကတော့ Kim Jo-Jo နဲ့ အတူတူပဲ အထကျတနျးကြောငျးမှာ တကျရောကျနသေူပါ
Sun-O ဟာ ကြောငျးသား/သူ တှကွေား popular ဖွဈသူပါ..သူက ခမျြးသာတဲ့ မိသားစုက သားတယောကျပါ…
ဒါပမေယျ့ Hwang Sun-O က မိဘတှဆေီကနေ အခဈြကိုမရပါဘူးတဲ့
Hwang Sun-O မှာ အရမျးခဈြရတဲ့ Lee Hye-Young ဆိုတဲ့ သူငယျခငျြးတယောကျရှိပါတယျ
Lee Hye-Young ကလညျးပဲ Sun-O, Jo Jo တို့နဲ့အတူ အထကျတနျးကြောငျးမှာ တကျရောကျနသေူပါ…ပွီးတော့ Lee Hye-Young က Jo Jo ကို သဘောကနြပေါတယျ…ဒါကို Hwang Sun-O က သတိထားမိပွီး သူ့သူငယျခငျြး Hye Young ဟာ တကယျပဲ Kim Jo-Jo ကို သဘောကနြတောလားဆိုတာကို သိခငျြပါတယျတဲ့…ဒါကွောငျ့ Sun O က Jo Jo ကို kiss ပေးလိုကျပါတယျတဲ့….
အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူတို့သုံးယောကျကွား သုံးပှငျ့ဆိုငျ အခဈြဇာတျလမျးလေး ဘယျလို အဆုံးသတျမလဲ
ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာ drama လေးလာမှပဲအတူတူကွညျ့ကွမယျနျော..